फेरी आउने भयो बजारमा नोकिया ३३१० मोडल इतिहास बनिसकेको नोकिया ३३१० मोडल फेरी बजारमा आउने भएको छ। २६ फ्रेव्रुअरीमा हुने वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेसमा नोकियाले ३३१० मोडललाई फेरि सार्वजनिक गर्न लागेको हो। उक्त फोन सेटको मुल्य करिब ६४ सय पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो फोन सेट पहिलो पटक सन् २००० मा सार्वजनिक भएको थियो। सुरुवाति दिनमा यो फोन निकै...
Biratnagar, Feb 21: The Chamber of Industries Morang is all set to kick off the Birat Expo – 2073 on Wednesday. Prime Minister Pushpa Kamal Dahal will be inaugurating the exhibition, Chamber's Chairman Mukesh Upadhyaya shared. The industrial fair will showcase industria...
निःशुल्क फेसबुक एनसेलमा यसरी चलाउनुस् काठमाडौं- एनसेलले मोबाइलबाट फेसबुक चलाउने आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा दिने भएको छ। 'इन्टरनेट सबैका लागि' थिम अन्तर्गत एनसेलले फेसबुकसँगको सहकार्यमा मंगलबार 'फेसबुक फ्री' सार्वजनिक योजना सार्वजनिक गरेको हो। 'फेसबुक फ्री अफर' यही बुधबार (फागुन ४) बाट लागु भई ९० दिनको लाग...
गाउँमा इन्टरनेट नचलेपछि भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनमा कठिनाइ सोलुखुम्बु । गाउँमा इन्टरनेट नचलेपछि भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटेका प्राविधिक सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । भूकम्पपीडितको लगत सङ्कलनका लागि विभिन्न गाविसमा खटिएका प्राविधिकले इन्टरनेट नचलेपछि सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन सदरमुकाम सल्लेरी आउन बाध्य भएका हुन्...
दुबई । दुबईमा एउटा यस्तो कारको परीक्षण गरिएको छ, जो सडकमा गुड्ने होइन कि हावामा उड्ने गर्दछ ।
दुबईले सन् २०३० सम्म मुलुकलाई &...
खोटाङ । सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल टेलिकम खोटाङले जिल्लाका १६ स्थानमा टेलिफोन टावर जडान गर्ने तयारी गरेको छ । दिक्तेलको पुरानो बेसक्याम्प र रत्नपार्कमा थ्रीजी सहितको जिएसएम मोबाइल टावर जडान गर्ने तयारी गरेको टेलिकमले यसै चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्लाका थप १४ स्थानमा पनि...
सामाजिक सञ्जाल सगुनको मिनी आइपिओ खुल्यो काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल सगुनको मिनी आइपिओ खुलेको छ। कम्पनीको २१ प्रतिशत शेयरमा मिनी आइपिओमार्फत २० मिलियन डलर (२ अर्बभन्दा बढि नेपाली रुपैयाँ) संकलन गर्ने उदेश्य सहित सगुनले अनलाइनबाट शेयर खुल्ला गरेको हो।
बैदेशिक लगानी खुला भएका विश्वका सबै देशहरुबाट सगुनमा लगानी गर्न सकिने जानकारी दिइ...
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाइ दुई करोड बेनी । सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले सुरु गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने अभियानमा ६ महिनाको अवधिमा रु दुई करोड सङ्कलन भएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापनाका लागि रु ५० करोड उठाउने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि सुरु गरेको ‘महादान अभियान’ अन्तर्गत सरकारी सहयोगबाहे...
एनसेलको भ्यालेनटाइन डे अफर....
काठमाडौं | मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ग्राहकले आफूले छानेको एउटा विषेश नम्बरमा सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्ने अफर ल्याएको छ । यस्तै रिङ ब्याक टोनमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
बुधबारदेखि लागु हुने गरी एनसेलले भ्यालेनटाइन डे अर्थात प्रणय दिवशको अवसारमा दुई आकर्षक योजना सार...
एप्पल, फेसबुक, गूगलसहित ९७ प्रविधि कम्पनीले ट्रम्पलाई चुनौति दिए काठमाडौं । एप्पल, फेसबुक, गूगलसहितका अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूला ९७ प्रविधि कम्पनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धविरुद्ध सामूहिक रुपमा कानूनी चुनौति दिएका छन् ।
ट्रम्पको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो व्यापारमा ठूलो नोक्सान भएको भन्दै उनीहरुले कानूनी चुनौति दिएका हुन्...
टेलिकमको फोरजी आयो, कसरी प्रयोग गर्ने ? आधुनिक प्रविधिमा आधारित पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवाको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन। पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा भित्रिए पनि मुलुकका सबै क्षेत्रको एकसाथ स्तरोन्नति हुन नसक्दा प्रयोगमा चुनौती थपिएको हो। डेटामा आधारित सेवा दिने चुनौती टेलिकमले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट (फोरजी) सुरु गरेसँगै थपिएको छ...
टेलिकमले ल्यायो निशुल्क ‘सिआरबिटी’ सेवा
नेपाल टेलिकमले सिआरबिटी अर्थात ‘कलर रिङ ब्याक टोन’को व्यवस्था थालेको छ। मोबाइलमा फोन गर्नेलाई गीत सुनाउनका लागि ल्याइएको सिआरबिटी व्यवस्थालाई टेलिकमले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर पुनः निरन्तरता दिएको जनाएको छ। स्थगित भएको सिआरबिटी अर्थात ‘कलर रिङ ब्याक टोन’को सुविध...
फेसबुक विश्वकै धनी कम्पनी
फेसबुक विश्वकै धनी कम्पनी मध्ये एक हो। कम्पनीले बुधबार आफ्नो कमाई सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो तीन महिनामा फेसबुकको विज्ञापनबाट हुने आम्दानी ५३ प्रतिशतले बढेको छ। फेसबुकको आम्दानी र यसका प्रयोगकर्ताको संख्यालाई विश्लेषण गरेर सिएनबिसीले प्रति प्रयोगकर्ता कति कमाई फेसबुकले गर्‍...